Amakhasi amahle kakhulu wokubuka ukulwa kwezinkunzi ku-inthanethi mahhala | Izindaba zamagajethi
Ungayibuka kanjani impi yezinkunzi ku-inthanethi mahhala
Izimpi zezinkunzi ziyaqhubeka nokuba nabalandeli abaningi kwamanye amazwe. Yize ukuba khona kwakhe kuthelevishini kwehle kakhulu. Ngakho-ke, abantu abafuna ukubabona kufanele basebenzise ezinye izindlela, njengokukwazi ukuzibuka eziteshini ezikhokhelwayo. Kepha uma ungafuni ukukhokha imali, kukhona ithuba lokuzibona ku-inthanethi. Njengoba kunamakhasi akuvumela ukuthi uwabuke mahhala.
Ngakho-ke, ngezansi sikukhombisa ezinye zezindlela ezinhle kakhulu zokwenza ukwazi ukubuka izimpi zezinkunzi ku-inthanethi mahhala. Njengoba sinamakhasi ewebhu atholakalayo walokhu, abalandeli abazokwazi ukuwabona ngawo noma nini lapho befuna.
1 Izinzuzo nezingozi zokubuka ukulwa kwezinkunzi ku-inthanethi
2 Izinkunzi ziqonde
3 I-RTV Toros
4 Buka i-TV
5 ISan Fermin TV
Izinzuzo nezingozi zokubuka ukulwa kwezinkunzi ku-inthanethi
Inzuzo enkulu yokubuka ukulwa kwezinkunzi online ukuthi zikhululekile. Awudingi ukuqasha ezinye izinhlelo zokukhokha ku-TV noma uqashe ezinye iziteshi ukuze uzibuke. Yonga imali. Ikakhulukazi uma ungenayo imali eningi, khona-ke kukhululeke kakhulu ukubheja lapho uzibona enetheni. Ngaphezu kwalokho, kumakhasi e-web kuvame ukuba nezinketho eziningi ongazibona, ngoba akukhawulelwe kumcimbi owodwa.
Ukuze abalandeli balolu hlobo lomcimbi bazokwazi ukubaqapha ngaso sonke isikhathi. Futhi sinamakhasi ewebhu amaningana atholakalayo, esivumela ukuthi sikhethe ngaso sonke isikhathi esikahle kakhulu noma esinokuqukethwe okuningi noma ikhwalithi engcono kakhulu ebitholakala ngaleso sikhathi. Lokhu kwenza kube ntofontofo.
Ngakolunye uhlangothi, khumbula ukuthi ikhwalithi ayihlali ihamba phambili ngaso sonke isikhathi. Ezimweni eziningi amakhasi awanazo izixhumanisi ezinhle. Ngakho-ke asikwazi njalo ukujabulela ikhwalithi yesithombe ehamba phambili. Kungenzeka futhi ukuthi izixhumanisi azizinzile, ukuze ziwe njalo. Okuthile okuthinta nokubukwa kwalezi zinkunzi. Lokhu kuyinto engenzeka futhi kuhle ukuyilungela. Enye into enhle okufanele siyikhumbule ukuthi akudingeki ukuthi sisebenzise i-akhawunti kunoma iliphi kulawa makhasi.
Leli khasi selivele likwenza kucace ngegama lalo ukuthi yini esingayilindela kuyo. Iwebhusayithi lapho sibuyisela khona izimpi zezinkunzi. Iningi lethu likwazi ukufinyelela ekusakazweni okubukhoma, ngakho-ke sibuka umcimbi bukhoma. Yize nabo bevame ukuba nemicimbi erekhodiwe, ngakho-ke uma ungayiboni, ungayibuka ngemuva kwesikhashana. Futhi ezimweni eziningi bahlehlise amanye ama-run abawasakazayo.
Iwebhusayithi ene-design elula impela, ngakho-ke ngeke ube nenkinga lapho uhambahamba kuyo. Kulula impela ukufinyelela kokuqukethwe okunjalo ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, kukhona injini yokusesha kuwebhusayithi uqobo, uma kwenzeka ufuna izimpi ezithile zezinkunzi. Konke kulula kakhulu, kepha iwebhusayithi enhle ukubona lezi zenzo.
Elinye ikhasi lelo mhlawumbe abathandi abaningi bokulwa nezinkunzi sebeyazi. Iqiniso ukuthi inezici eziningi ezifanayo newebhusayithi yangaphambilini esiyishilo. Inomklamo olula kakhulu, okuvumela ukuthi uzulazule kuwebhu ngokunethezeka okuphelele. Ngaphezu kokuba nenjini yokusesha eyenza kube lula ukuthola okufunayo ngaso sonke isikhathi kuyo. Ngakho-ke azikho izinkinga kuleyo ndaba.
Ikuvumela ukuthi ubone ukulwa kwezinkunzi kuphila kalula. Imvamisa bahlala benesixhumanisi ongakwazi ngayo ukubona okuthandayo ngaso sonke isikhathi. Zikhombisa futhi zombili lezo ezenzeka eSpain nezinye ezibanjelwa phesheya. Ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthola eyodwa enentshisekelo kubo ngaphandle kwenkinga enkulu. Ungabona konke okuqukethwe kuwebhu mahhala ngaphandle kokuthi ube ne-akhawunti kuwebhu. Izinga lokusakazwa liyahlukahluka, yize kuhlala kukhona isixhumanisi esisebenza kahle kakhulu.
Le webhusayithi yesithathu ingenye yezinketho ezisetshenziswa kakhulu uma kukhulunywa ngokubuka ukulwa kwezinkunzi online. Iwebhusayithi evumela ukufinyelela kuziteshi eziningi eziku-inthanethi ngendlela elula. Ngenxa yalokhu, imicimbi eminingi yazo zonke izinhlobo iyabonakala, kufaka phakathi lezi zingxabano zezinkunzi ezithandayo abasebenzisi. Iwebhu inomklamo olula, engalethi nkinga lapho uyisebenzisa. Ngakho-ke ngeke ube nezinkinga uma uyibhekabheka ngaso sonke isikhathi.
Ngokuvamile kunezixhumanisi ezanele kubasebenzisiukuze bakwazi ukuthola ukusakazwa abakuthanda kakhulu. Ikhwalithi yalezi zixhumanisi ivame ukuba yinhle. Yize kuhlale kunakho konke, kepha ngokuvamile akulula ukuthola eyodwa ezinzile futhi esebenza kahle. Abanazo izikhangiso eziningi kakhulu kuwebhu, okwenza kungacasuli uma kukhulunywa ngokubuka okuqukethwe. Akudingekile ukuba ne-akhawunti kuyo ukubuka lokhu okuqukethwe.
ISan Fermin TV
Sigcina sinewebhusayithi eyenzelwe ngokukhethekile labo abafuna ukubona konke okuphathelene neSan Fermín. Ngenxa yaleli khasi lewebhu kungenzeka ukubona zonke izinkunzi zigijimela ePamplona kulezi zinsuku. Ungabona futhi ukulwa kwezinkunzi okubanjelwe umcimbi womkhosi enhlokodolobha yaseNavarran. Ngakho-ke yiwebhusayithi egxile kule micimbi. Inketho enhle kulabo abanentshisekelo ekhethekile kuleli sonto.
Idizayini yewebhu iyefana naleyo yamakhasi amabili okuqalaCishe kungabantu abafanayo ababophezelekile. Kulula kakhulu ukusebenzisa idizayini, enenjini yokusesha ehlanganisiwe ekuvumela ukuthi uthole okufunayo ngaphandle kwenkinga enkulu. Ngakolunye uhlangothi, imvamisa benza izixhumanisi ezimbalwa zitholakale, yize ikhwalithi ihlala iguquguquka. Kepha iyiwebhusayithi enhle ngalo mqondo, ezokuvumela ukuthi ubone konke okuhlobene neSan Fermín, ngaphandle kokwenza i-akhawunti.
ISan Fermín TV
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ukuphanga » Ungayibuka kanjani impi yezinkunzi ku-inthanethi mahhala
Ungayakha kanjani idokhumenti ye-PDF
Ungalishintsha kanjani igama ne-password ye-WiFi